> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka BlackBerry Playbook
Maxaa dhacaya ka dib sawiro la tirtiro ka BlackBerry Playbook
Inaad horey u badan tahay in u yimaadeen inay u aragto in sawirada aan si dhakhso ah baabi'i doontaa marka aad iyaga tirtiray ka BlackBerry Playbook. Marka ugu, files xaqa noqon doonaa aan la arki karin (yaraaday midab). Sidaa darteed, meel bannaan oo lagu keydiyo loo isticmaalo in uu kaydiyo ee photos tirtiray waxaa la qorayaa sida loo isticmaali karo si loogu kaydsado file cusub. Isla mar ahaantaa, meesha bannaan ee la lugeeyaa xusuus aad Playbook ayaa noqon doona ka badan ka hor.
Tan ugu muhiimsan, waxaan weli soo kaban karto, kuwa photos tirtiray haddii aan loo baahan yahay in? Haa, dabcan! Si ay u qabtaan soo kabasho sawir BlackBerry Playbook, waxaad u baahan tahay qalab kabashada sawir. Isku day inaad soo Wondershare Photo Recovery . Waa socon labada Windows iyo Mac kumbiyuutarada. Barnaamijkan xirfadeed oo aad aaminsantahay si buuxda u taageersan soo kabashada ee photos tirtiray ka BlackBerry Playbook. Waxaad si fudud u soo ceshano kartaa sawirro aad ee 3 talaabooyin fudud.
Hel version maxkamad of this BlackBerry Playbook software kabashada sawirka hadda. Ha iloobin in aad doorato version saxda ah ee computer.
Fiiro gaar ah : Haddii aad sawiro ama videos cusub kaarka la mid ah xasuusta ama qalab lagu qabtay, habka dib u soo kabashada adkaan doonto in ka badan daahirnimo iyo u dhawi isagoo aan macquul aheyn. Taasi waa sababtoo ah files cusub overwrite doonaa bannaan ee la heli karo iyo kaydinta halkan ka, kuwii hore lagu gebi doono iyo irrecoverable. Sidaa darteed, waxa aad helaysaa in aad joojiso qaadashada Playbook marka aad si qalad ah tirtirayaa ama la tirtiro wax files si looga fogaado in xaaladda. Ka dib markii in, hawsha dib u soo kabashada sida ugu dhaqsaha badan.
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka BlackBerry Playbook
Tallaabada 1. Isku aad BlackBerry Playbook in kombiyuutarka
First of dhan, xiriiriyaan BlackBerry Playbook si aad u computer. Markaas aan bilowno barnaamij oo guji Start si ay u bilaabaan soo kabashada sawirka.
Tallaabada 2. Dooro iyo baarista BlackBerry Playbook for photos tirtiray
Waxaad had iyo jeer qabsato kartaa Filter Options ama guji Refresh eryi haddii ay si habboon u soo bandhigay interface ka.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray sawiro ka BlackBerry Playbook la mid click
In ka Scan Results , waxaad ku eegaan karaan faylasha aad soo kabsaday ka dibna sii soco ilaa sax kuwa ama wax alla wixii aad rabto in aad hor inta uusan goolka ugu Ladnaansho button.
Fiiro Gaar ah : Isku day in aadan mar badbaadin xogta soo kabsaday aad BlackBerry Playbook ama kaadhka xusuusta. Waxaad mar walba u badbaadin karaa on your computer ama drive dibadda adag rahmaad ah.
Video tutorial soo kabashada sawir Blackberry Playbook
Mar walba oo aad ka daawan kartaa tutorial video for faham wanaagsan ka.